DEG-DEG: Manchester United Oo Qarka U Saaran Saxeexii Labaad, Kaddib Jadon Sancho - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaDEG-DEG: Manchester United Oo Qarka U Saaran Saxeexii Labaad, Kaddib Jadon Sancho
DEG-DEG: Manchester United Oo Qarka U Saaran Saxeexii Labaad, Kaddib Jadon Sancho
July 1, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Suuqa Kala Iibsiga, Wararka Premier League 0
Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa qarka u saaran difaaca Real Madrid ee Raphael Varane oo ay xiise dhab ah u muujisay, xilli uu laacibkani doonayo inuu iskaga tago Spain.
Difaacan reer France oo qandaraaskiisa Santiago Bernabeu ay ka hadhsan yihiin 12 bilood oo kaliya ayaa iska diiday inuu kordhiyo heshiiska, waxaanu albaabada u furay inuu ka tago kooxda.
Untied ayaa muddo dheer raadinaysay Varane, waxaana marar hore isku dayay inuu lasoo saxeexdo Ed Woodward oo sannadkii 2018 qirtay in Manchester United ay isku diyaarisay inay qasnaddeeda u jabiso saxeexa laacibkan.
Real Madrid ayaa go’aansatay inay iibiso Varane iyadoo ka baqaysa inuu si bilaash ah kaga tago sannadka 2022, waxaana la rumaysan yahay inay ku iibinayso lacag gaadhaysa £70 milyan oo Gini.
Sida uu ay sheegtay warbaahinta ESPN, labada kooxood ee Manchester United iyo Real Madrid ayaa maalmihii ugu dambeeyey lahaa wada-hadallo ay kaga wada-xaajoonayaan heshiiska Varane, laakiin Man United ayaa la shir-tagtay lacag aad uga hoosaysa midda ay Madrid doonayso.
Warka ayaa intaa ku daray, in United ay u bandhigtay Madrid £45 milyan oo Gini, balse qaabka wax u socdaan ay muuqato horumar weyn oo labada kooxood ka sameeyeen wada-xaajoodkooda.
Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa waxa uu hore indhaha ugu hayay Pau Torres oo Villarreal ah, laakiin hadda waxay xaqiijinayaan saxeexa Varane oo ay rumaysan yihiin in khibradda uu leeyahay ay ka caawin doonto in kooxdu ku dagaallanto horyaalka Premier League.
Manchester United ayaa hore u xaqiijisatay saxeexa weerarka garabka England ee Jadon Sancho oo ay £72.5 milyan oo Gini kagala soo wareegtay Borussia Dortmund.